चितवन प्रकरणमा प्रहरी प्रवक्ता भन्छन् : ‘प्रहरीलाई अनावश्यक शंका गरियो’
नेपालमा पछिल्लो समय आत्महत्याका घटनाहरु बृद्धि भइरहेका छन् । दैनिक १६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङले देखाउछ । र यो बर्षेनी ८ प्रतिशतले दरले बढीरहेको पनि छ । आत्महत्याकै मुद्धालाई हेर्ने हो भने अधिकाशं आत्महत्याका घटनाहरु ‘विवाददास्पद’ बन्ने गरेका छन् ।
यो आत्महत्या वा हत्या हो भन्ने बिषयमा बिश्लेषण र विवाद सृजना हुने गरेको छ । आखिर किन आत्महत्या बढ्दै छ ? र आत्महत्या पछि विवाद किन हुने गर्छ त भन्ने बिषयमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रिय प्रवक्ता डिआईजी विश्वराज पोखरेलसँग एभिन्यूज टेलिभिजनले गरेको भिडियो कुराकानीबाट अपराध न्यूजले निकालेको सम्पादित कुराकानीको अंश यस्तो छ ।
आत्महत्यापछि हुने विवादको चुरो कुरा के हुन सक्छ ?
नेपालमा आत्महत्याको घटना बढेको अवस्था छ । तर आत्महत्यापछि हुने विवाद त्यति धेरै भएको अवस्था भने हैन । अब कारण हेर्ने हो भने धेरै छन् । संसारका सम्पन्न मुलुकह जहाँ नागरिकले सबै सुबिधा पाइरहेका छन् त्यहाँ पनि आत्महत्याको दर उच्चनै देखिन्छ । जहाँ गरिबी र विपन्नता भएका मुलुक छन् त्यहा यसको दर कम छ । यो सबै कुरा एउटा व्यक्तिको खुशीसँग जोडिन्छ ।
उसको खुशी कतैबाट खोसियो, कमजोर भयो र उसमा निराशा आयो भने उसले आत्महत्या गरेको देखिन्छ । व्यक्ति खुशी हुन सबै कुरा जोडिन्छ । उसमा जबसम्म ‘डिप्रेसन’ आउदैन तबसम्म आत्महत्या हुदैन । केही घटना भने आवेशमा हुन्छन् ।
आत्महत्याको बिषयमा कम विवाद हुन्छन् । अहिले आएको कानुनमा ‘दुरुत्साहन मुद्धा’ ले गर्दा कारण खोजिन थालिएको छ । आत्महत्या नै भएको अवस्थामा पनि प्रहरी अनुसन्धानपछि मात्र आत्महत्या भएको पुष्टि गर्छ ।
आत्महत्या नभई मृतक पक्षले यो कर्तव्य ज्याननै भएको भनेर कतिपय घटनामा दाबी गरिन्छ । देख्दा पनि मृतक पक्षले त्यसलाई आत्महत्या देख्दैन । तर प्रहरीले तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्र आत्महत्या भएको पुष्टि गर्छ ।
पछिल्लो समय पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरण र दुरुत्साहन मुद्धाले चितवन तनावमा छ । यो घटनामा दोषी को ?
नेपालमा कुल आत्महत्याको घटनामा ७५ प्रतिशत झुण्डिएर घटेको तथ्याङ छ । झुण्डिएर आत्महत्या गरेको केशमा ‘मारेपछि झुण्डिाइएको हो कि आफै जिउदो हुदा झुण्डिएको’ भन्ने बिषयमा डाक्टरले सहजै थाहा पाउन सक्छ । पुडासैनीको केशमा भने प्रहरी प्रारम्भीक चरणको अनुसन्धानमै छ ।
प्रहरीले यो केशलाई दुरुत्साहन मुद्धा चलाएको छ । उनले मर्नु भन्दा अगाडी रेकर्ड गरेको भिडियोमा प्रहरी अहिले अनुसन्धानमै छ । भिडियोमा नाम लिएका व्यक्तिहरुको अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। अहिलेनै दोषी को हो भन्ने अवस्था छैन ।
यो प्रकरणमा प्रहरीमाथि पनि अनेकन आरोप र शंका गरिएको अवस्था छ । यो घटनामा प्रहरीले कसैलाई फसाउने र थुनाउने काम गरेको छैन। यसमा स्पष्ट भए हुन्छ । यदी कोही प्रहरी यसमा लागेको छ भन्ने पुष्टि भए हामी कारबाही गछौ ।
प्रहरीप्रति गरिएको शंका तथ्यको आधारमा हुनुपर्छ । अब पुडासैनी प्रकरणको फैसला अदालतले गर्ने छ ।
चितवनमा झडप पनि भयो नि ?
रवि लामिछानेका समर्थकहरुले गरेको आन्दोलन कतिको शान्तिपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि त हेर्नु पर्यो । एउटाको अधिकार माग गर्दा अरुको अधिकार हनन् हुनु त भएन । चितवनमा प्रहरीमाथि आक्रमण भएको छ । प्रहरी घाइते भएका छन् । प्रहरीले आफ्नो काम धर्यताको साथ गरिरहेको छ ।
पत्रकार रवि लामिछानेलाई फसाउन प्रहरीलाई राजनितिक दबाब छ भन्ने आरोप पनि छ नि ?
ठोकुवाका साथ भन्छु यो केशमा कुनै दवाब प्रहरीलाई छैन । कसैको दवाबमा अदालतले रिजल्ट पनि दिने हैन । तथ्य र सत्यले के बोल्छ त्यही नतिजा आउछ ।
र अहिले चितवनमा भइरहेको आन्दोलनको प्रभावले पनि अनुसन्धान प्रभाबित हुन्न । सरकारी वकिल र चितवन प्रहरीले निस्पक्ष रुपमा घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ ।